Global Voices teny Malagasy · 22 Avrily 2012
22 Avrily 2012
Tantara tamin'ny 22 Avrily 2012
Espaina: Ny Mpanjaka Sy Ny Elefanta
Eoropa Andrefana22 Avrily 2012
Natao fandidiana ny Mpanjaka Juan Carlos tamin'ny 14 Aprily lasa teo satria tapaka andilana noho ny fianjerana nahazo azy nandritra ny fihazany elefanta tany Botswana, ao Afrika. Nanambara izany voina izany ny solontenan'ny fianakavian'ny mpanjaka rehefa vita soa aman-tsara ny fandidiana natao tamin'ny mpanjaka ary mbola tsaboina an-kahamehana ao amin'ny hopitaly...
Tontolo Arabo: Ireo Teknolojia Niasa Nandritra Ny Fotoanan'ny Revolisiona
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana22 Avrily 2012
Efa niteraka adihevitra ny fanovana nentin'ny fifampitam-baovaon'olo-tsotra sy ny teknolojian'ny finday teo amin'ny fitroarana Arabo. Na inona na inona anefa ny fehin-kevitra avy aminao, azo heverina tokoa fa nampiasa ireo taranjan-teknolojia vaovao ireo ny mpikatroka ary hitarataratra ny sasantsasany amin'izy ireny isika amin'ity lahatsoratra ity. Mitatitra ny fisamborana anao Maro ny bilogera...
Pakistana: Aoka Izay Ny Fanaovana Anay Ho Toy Ny Fanariam-pako
Azia Atsimo22 Avrily 2012
Lasa dabam-pako fanariana plastika sy fako ara-pitsaboana iray goavana i Pakistana tato anatin'ireo folo taona farany. Efa ela izao no tratran'ny aretina mampidi-doza ny mponina ao amin'io firenena io noho ny tsy fahampian'ny fitandremana. Mizara ny fihetseham-pon'ireo mpampiasa aterineto i Faisal Kapadia.